Filtrer les éléments par date : vendredi, 04 décembre 2020
vendredi, 04 décembre 2020 19:26
Fahasalamam-bahoaka : Nisy fihenana ny tahan’ny fanaovam-baksiny eto Madagasikara
Ny faritra Analamanga, Vatovavy Fitovinany, DIANA sy SAVA ary Atsinanana no tena voakasik’izany fihenana izany.
Amin’ny ankapobeny, manodidina ny 88% io tahan’ny fanaovam-baksiny io manerana ny Nosy, raha toa ka 95% ny fenitra tokony ho tratrarina.
Nisy ny dinika mialoha ahafahana mametraka ny paikady rehetra niarahan’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka sy ireo Mpiaramiombonantoka aminy misalahy ahazoan’ny tsirairay misitraka ireo tolotra fahasalamana sahaza.
vendredi, 04 décembre 2020 19:08
Fitsarana : Nifarana andoany ny fiofanan’ny lehiben’ireo mpirakidraharaha
Nifarana androany zoma faha-4 desambra ny fiofanan’ireo lehiben’ny mpirakidraharaha (greffier en chef) rehetra manerana ny nosy.
Miopana amin’ny fitantanana ny taokaonty eo anivon’ny lehiben’ny firaketandraharaham-pitsarana sy ny fotokevim-panatanterahana ny didim-pitsarana (la comptabilité des greffes et le principe exécutoire des décisions judiciaires) ny fiofanana.
Nanomboka ny talata voalohan’ny volana teo ity fiofanana izay notontosaina tao amin’ny Sekolim-pirenerena ho an’ny mpitsara sy ny mpirakidraharaha (ENMG) ao Tsaralalàna, Antananarivo, ity.
vendredi, 04 décembre 2020 18:30
4 décembre : Journée internationale des banques
vendredi, 04 décembre 2020 18:03
Sampana mpamonjy voina-CUA: Nankalaza ny Olomasina mpiaro azy
Nankalaza ny Masimbavy Barbe mpiaro azy ny Sampana mpamonjy voina an’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny 4 desambra 2020. Izay hiateherana amin’ny fiarovana amin’ny afo amin’izay mino.
Ny fankalazana androany dia mifantoka amin’ny fampihononana sy fametrahana ao anatin’ny asa iombonan’ny mpamonjy voina.
Nohamarihana tamin’ny hetsika fifaninanana ara-panatanjahatena sy fiaraha-misakafo ny fotoana mba ho fiaraha-mientana hanomezana lanja ny « Esprit de corps » ny mpamponjy voina.
Voalazan’ny Kolonely Razafimanahaka Tiana, Lehiben’ny sampana mpamonjy voina, fa efa fanao isan-taona izao fankalazana izao.
vendredi, 04 décembre 2020 17:48
Tafika Malagasy : Manao tatitra ankapobeny ho an’ny taona 2020
Manatanteraka fihaonambe mandritra ny roa andro, anaovana tatitra ankapobeny ho an’ny taona 2020, eny Ambatomirahavavy, ny Tafika Malagasy.
Tonga teny an-toerana ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian, izay nanamafy fa ny “famerenana ny filaminana sy ny fandriampahalemana ao anatin’ny fotoana fohy no vina voalohany. Manatràtra izany tanjona izany isika ka manana fanamby betsaka ny firenena amin’izao fotoana izao, ary izao vaninandro izao dia mitaky Tafika manakaiky vahoaka”, hoy izy.
Ny faharoa dia ny anjara andraikitra eo amin’ny fametrahana ny filaminana sy ny fandriampahalemana.
Nambarany fa raha atao jery todika ny tamin’ny roa taona lasa dia mbola nanjaka ny asan-jiolahy maro isan-karazany sy ny tsy fandriampahalemana.
Antananarivo : Hisy fanapahana herinaratra haharitra ora roa eo anio
Mbola hiroso amin’ny fanapahana herinaratra ny Jirama anio Zoma 04 desambra 2020 ka 20MW na ny 8%-n’ny filàna amin’ny hariva no hotapahana.
Haharitra adin’ny roa ny fanapahana ka voakasik’izany Andravoahangy sy ny manodidina ; Mahazo sy ny manodidina ; Antanimora sy ny manodidina ; Ankadimbahoaka sy ny manodidina ; Sabotsy Namehana sy ny manodidina ; Ivato sy ny manodidina ; Ambohimanarina sy ny manodidina ; Itaosy sy ny manodidina ; 67Ha sy ny manodidina ary Ambondrona sy ny manodidina.
Tsy hisy ny fanapahana mandritra ny Sabotsy sy Alahady, noho ny fihenan’ny fampiasana herinaratra araka ny fampitam-baovaon’ny Jirama hatrany.
Ho vahaolana fohy ezaka hamahana ny olan’ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina, dia hiroso amin’ny fandatsahana orana artifisialy ny Jirama miaraka amin’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro .
Raha ny vinavina dia ny Talata 08 desambra ho avy io no ho feno ny fepetra hahafahana mandatsaka orana artifisialy amin’ny sahandriakan’Andekaleka sy ny farihin’i Mantasoa hahafahana mampiakatra ny tosaky ny rano ao amin’ireo tohodranon’ny Jirama.
Haino aman-jery : Notokanana ny fanavaozana foto-drafitrasa ao amin'ny ORTM
Notanterahina ny alakamisy 3 desambra 2020 ny lanonana nanolorana ny asa fanarenana sy fanavaozana natao teo anivon’ny ORTM, izay rantsamangaikan’ny ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina.
« Manova ny tantaran’ny firenena isika », hoy ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian ka « mandray anjara amin’izany tanjona lehibe izany ny sampandraharaha ara-panjakana rehetra ».
Izay indrindra no antony nitondrana fanavaozana eo anivon’ny haino aman-jerim-panjakana, ka namboarina sy nohatsaraina ny eto amin’ny foibe ORTM, toy ny birao maro, nampiana ihany koa ny trano famokarana, ary nohatsaraina ny kalitaon’ny feo eo anivon’ny RNM.
« Andrarezin’ny haino aman-jery eto amin’ny firenena ny TVM sy RNM ; mba hahatongavana amin’izany anefa dia mila fanovàna ny fomba fisainana, mila atao mby an-tsaina lalandava fa ny fananam-panjakana dia fananam-bahoaka », hoy ny Praiminisitra.
vendredi, 04 décembre 2020 17:23
JIRAMA : Miomana amin’ny fandatsahana orana any amin’ny sahandriakan’Andekaleka
Hiroso amin’ny fandatsahana orana any amin’ny sahandriakan’Andekaleka ny JIRAMA, miaraka amin’ny sampana mpamantatra ny toetrandro manoloana ny fahasahiranana ny famatsiana herinaratra eto amin’ny Tambazotra Iraisan’Antananarivo.
Antony mahatonga izany ny fihenan’ny rano mampiodina ny tohodranon’Andekaleka, izay miantoka ny iray ampahatelon’ny herinaratra vatsiana eto amin’ny Tambazotra Iraisan’Antananarivo.
Amin’izao fotoana izao, zara raha mamokatra 22MW ity tobim-pamokarana herinaratry ny JIRAMA, mandeha amin’ny rano ity raha tokony ho 93MW izany amin’ny mahazatra.
Misy fahabangana lehibe araka izany ny lafiny famokarana herinaratra ka manery ny JIRAMA hanapaka 25MW (10%-n’ny filàna amin’ny hariva) mandritra ny adiny 2 eo ho eo, na dia efa nampiasaina daholo aza ireo milina rehetra mpamokatra herinaratra eo am-pelatanan’ny JIRAMA.
Isan’ny tapaka amin’izany Andoharanofotsy sy ny manodidina ho an’ny ilany Atsimo ; Ambohimangakely sy ny manodidina ho an’ny ilany Atsinanana ; Analamahitsy sy ny manodidina ho an’ny ilany Avaratra ; Itaosy sy ny manodidina ho an’ny ilany Andrefana ary Analakely sy ny manodidina ho an’ny ilany Afovoany.
Tanterahina avy hatrany ny fandatsahana orana vantany vao feno ny fepetra rehetra mikasika izany.
vendredi, 04 décembre 2020 10:39
Toetr’andro : Mitohy ny rotsak’orana natoraly manerana ny afovoan-tany, afa-tsy ny ao Fianarantsoa
Saika ahazo orana avokoa ny faritry ny afovoan-tany rehetra manerana ny Madagasika mandritra ity herinandro ity.
Tsy orana nampiana tosika na "pluie provoquée" anefa izany fa orana natoraly na oram-pahavaratra fotsiny ihany, ankoatra ny ao amin'ny faritany Fianarantsoa izay ny JIRAMA manokana no nangataka tamin'ny Météo Malagasy mba handatsaka orana any an-toerana.
Natao mba hamatsiana ny rano izay vokarin'ny JIRAMA ho an'ny mpanjifa moa izany.
Samihafa moa ny atao hoe : "pluie artificielle" sy "pluie provoquée". “Pluie provoquée” izay atao amin'ny alalan'ny famafazana sira eny amin'ny rahona manokana ahazoana teten-drano lehibe kokoa ka ahafahany milatsaka ho tonga orana ety an-tany.
vendredi, 04 décembre 2020 10:14
Toe-karena : Miakatra ny vidin'ny PPN
Maro ireo mpivarotra tsy mampiseho vidin'entana.